Chigadzirwa ruzivo Fibre optic PLC (Planar lightwave wedunhu) mahwanda anozonzi blockless fiber PLC mahwanda, imhando yemagetsi emagetsi manejimendi mudziyo unogadzirwa uchishandisa silica Optical waveguide tekinoroji kugovera masaini emagetsi kubva kuCentral Office (CO) kuenda kunzvimbo dzakawanda dzepamberi. Fiber optic mahwanda rudzi rweODN chigadzirwa chakakodzera maPON network anogona kuiswa mune pigtail kaseti, bvunzo chiridzwa uye WDM system, iyo inoderedza nzvimbo yekugara. ...
Fiber optic PLC (Planar lightwave redunhu) mahwanda mamwe anonzi asingavharwi fiber PLC mahwanda, imhando yemagetsi emagetsi manejimendi dhizaini iyo inogadzirwa ichishandisa silica optical waveguide tekinoroji kugovera zviratidzo zvemaziso kubva kuCentral Office (CO) kuenda kunzvimbo dzakawanda dzepamberi.
Fiber optic mahwanda rudzi rweODN chigadzirwa chakakodzera maPON network anogona kuiswa mu pigtail kaseti, bvunzo chiridzwa uye WDM system, iyo inoderedza nzvimbo yekugara.
Kuderera kwekuisa kurasikirwa (IL)
Low polarization inotsamira kurasikirwa (PDL)
Dhizaini inowirirana inobvumidza kuiswa nemabhokisi akasiyana-siyana ekumisa
Nyore uye yakaderera mutengo FTTH kuisirwa
Kwakanaka kugadzikana kwezvakatipoteredza
Kushanda wavelength (nm)
Optical fiber ukobvu, mm mmmm
Optical internet mhando
Kuisa kurasikirwa (dB)
Polarization Inotsamira Kurasikirwa (dB)
Wavelength kunoenderana Loss (dB)
Kudzoka kurasikirwa (dB)
Inoshanda tembiricha ℃
-20 kusvika 85
Kuchengetedza tembiricha ℃
-40 kusvika 85
Optical internet kureba (m)
Mukati uye kunze kwemukova FTTH kuisirwa
Optical fiber yekuona masisitimu
Iyo isina blockcha PLC kutsemura inogona kubvumidza imwechete GPON network interface kuti igovaniswe pakati pevazhinji vanonyoresa uye bvumidza vanopa sevhisi kugonesa bandwidth-yakasimba application. Iyo isina blocker mahwanda inoratidzira diki saizi, inova yepakati sarudzo pakati pevhoriyamu miniaturization uye yakavimbika fiber dziviriro. Iyo yakakodzera kuiswa mune yako system dhizaini uye kugadzira Iyo PLC mahwanda atinopa ndeaya: 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 1 × 32,1 × 64.
Iyo pasuru yeiyi PLC mahwanda iri nyore katoni bhokisi. Iyo pallet kurongedza nzira inowanikwa zvakare, tarisa zvimwe zvakawanda nekutengesa kwedu.
Jera mutsara uri kushanda zvinoenderana neIO 9001: 2015, izvi zvinotibvumidza kutengesa kune nyika dzinopfuura makumi mana nematunhu akadai seCIS, Europe, South America, Middle East, Africa, neAsia.
Isu tinopa fiber Optical Cable accessories kune FTTH zvivakwa uye tinopa iyo yakazara kit yezvinhu kune vatengi vedu, senge internet optic tambo, tambo dzesimbi, tambo yebracket, fiber optic kugumisa mabhokisi, adapters, chigamba tambo zvichingodaro.
Welcome to kutirovera runhare pamusoro Fiber optic PLC mahwanda mutengo.
Pashure: Mini PLC Makaseti mahwanda
isina blockcha PLC kutsemura
Fiber Optic Cable mahwanda Factory
Fiber Optic Cable mahwanda Vagadziri
Fiber optic PLC mahwanda mutengo
mini kaseti PLC mahwanda
Fiber optic yekuparadzira bhokisi, Fodb-8
Ftth kugumisa bhokisi FODB-8A